आईपीओ के हो ? कसरी भर्ने ? जानिराखौं - ramechhapkhabar.com
आईपीओ के हो ? कसरी भर्ने ? जानिराखौं
पछिल्लो समय सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। लगानीकर्ता संस्थाका रुपमा नयाँ–नयाँ कम्पनीको प्रवेश पनि बढ्दो छ। तर, आकर्षण बढ्दै गए पनि धेरैतिर आईपीओ कसरी भर्ने? सेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने? भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ।
आईपीओ, जसलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ अर्थात् प्राथमिक सेयर पनि भनिन्छ। पछिल्लो समय आईपीओ भर्नका लागि लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन मर्चेन्ट बैंकहरुले पनि विभिन्न खालका प्याकेजहरु ल्याइरहेका छन्। हाल सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ता कतिपय आफैं जानेर आवेदन दिन आउँछन् भने कतिपय लगानीकर्ता आफन्त वा साथीभाइको सल्लाहका आधारमा पनि आईपीओ भर्छन्।
सेयर बजारमा लगानीकर्ता दुई तरिकाबाट प्रवेश गर्न सक्छन्। पहिलो, प्राथमिक बजार, जहाँ आईपीओका लागि आवेदन दिएर गोलाप्रथाबाट सेयर हात पार्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो बजारमा भने सीधै प्रवेश गरेर बजार मूल्यअनुसार आफूले चाहेको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ। प्राथमिक सेयर बजारमा प्रवेश गरेका लगानीकर्तालाई जोखिम कम हुन्छ भने दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेका लगानीकर्ताको जोखिम प्राथमिक सेयर लगानीकर्ताको भन्दा धेरै हुन्छ।
आईपीओमा जोखिम कम र फाइदा बढी हुने हुँदा सर्वसाधारणको आकर्षण छ। तर, अहिले आईपीओ हात पार्न भने चमत्कारसरह बन्न थालेको छ। आईपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या उच्च भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।
के हो आईपीओ?
कुनै पनि सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनीले पुँजी संकलनका लागि प्रथमपटक निष्कासन गरेको सेयर आईपीओ हो। यसको अंकित मूल्य साधारणतया: १०० रुपैयाँ हुन्छ। एक कित्ता आईपीओ १०० रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ। कतिपय कम्पनीको मूल्य भने त्योभन्दा बढी पनि तय गरिएको हुन्छ। आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धक पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओको जोखिम के कस्तो छ भनेर केयर रेटिङ नेपाल र इक्रा नेपालले मूल्यांकन गरेका हुन्छन्। यी दुई कम्पनीले लगानी गर्न योग्य कम्पनीहरुको रेटिङ गरेका हुन्छन्। यसरी प्रक्रियामा गएको कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाउँछ। बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्छ। सूचनामा आवेदन कहिलेदेखि कहिलेसम्म खुलाउने? कति कित्तादेखि कति कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने? भन्नेबारे स्पष्ट खुलाइएको हुन्छ।
आईपीओमा आवेदन दिन के–के चाहिन्छ?
आईपीओ भर्न सबभन्दा पहिले लगानीकर्तासँग कुनै पनि बैंकको खाता हुनुपर्छ। बैंक खाता नभई यसपछिका प्रक्रियाहरु अघि बढाउन सकिन्न। यदि बैंक खाता छैन भने पहिले बैंकमा गएर खाता खोल्नुपर्छ।
२. डिम्याट खाता
लगानीकर्ताले बैंक खाता खोलिसकेपछि डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले बैंक खाता खोलेको बैंक, धितोपत्र दलाल कम्पनी (ब्रोकर) वा मर्चेन्ट बैंकहरुमा गएर पनि डिम्याट खाता खोल्न सक्छन्। डिम्याट खाता भनेको सेयर राख्ने खाता हो। बैंकमा पैसा राख्नका लागि बैंक खाता खोलेजस्तै सेयर राख्नका लागि डिम्याट खाता आवश्यक पर्छ।
यसरी बैंक खाता तथा डिम्याट खाता खोलेका लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ खुलेको बेला बैंक वा मर्चेन्ट बैंकमा गएर एउटा फाराम भरेर आईपीओमा आवेदन दिन सक्छन्। कोरोना महामारीपश्चात् धेरैजसो सेयर कारोबारको काम विद्युतीय माध्यमबाट हुने गरेको छ। यसले गर्दा अहिले बैंकमा गएर आईपीओ भर्नेको संख्या पनि न्यून हुँदै गएको छ।
३. अनलाइनबाट आवेदन दिन ‘मेरो सेयर’
सेयर बजारमा अनलाइनबाटै लगानी गर्न लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलिसकेपछि ‘मेरो सेयर’ सुविधा लिनुपर्छ। मेरो सेयरको सुविधामार्फत् लगानीकर्ताले घरमै बसेर आईपीओ भर्न सक्छन्। अहिले बैंकमा गएर डिम्याट खोल्दा नै मेरो सेयरको पनि फाराम भर्न पाइन्छ। मेरो सेयरको फाराम भरेपछि इमेलमा युजर आईडी र पासवर्ड प्राप्त हुन्छ। मेरो सेयरको आईडी र पासवर्ड लिएपछि लगानीकर्ताले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्छन्।
४. सीआरएन नम्बर
मेरो सेयरबाट आईपीओमा आवेदन दिन सीआस्वा (सीआरएन) दर्ता गर्नुपर्छ। यसका लागि बैंकमा गएर सीआरएनको फाराम भर्नुपर्छ। फाराम बुझाएपछि बैंकले सीआरएन नम्बर दिन्छ। आईपीओमा आवेदन दिनेबेला सीआरएन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। सीआरएन नम्बर जुन बैंकको छ, त्यो बैंकको खातामा भएको पैसाबाट आईपीओका लागि आवेदन दिने हो। यदि, खातामा पैसा नभएको बैंकको सीआरएन नम्बर राखेको खण्डमा आईपीओको आवेदन नै रद्द हुन्छ।
आईपीओ परेको कसरी थाहा पाउने?
‘मेरोसेयर डट सीडीएससीडटकमडटएनपी’ खोलेर वा मोबाइलमा मेरो सेयर एप डाउनलोड गरेर युजर आईडी राख्नुपर्छ। तपाईंलाई इमेलमा उपलब्ध भएको पासवर्ड अब परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईं आफूले चाहेको पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया सकिएपछि पुनः चार अंकको पिन कोड बनाउनु आवश्यक छ। यो प्रक्रियापछि मेरो सेयरबाट आईपीओमा आवेदन दिन सकिन्छ। त्यसपछि ‘माइ आस्वा’ ब्लकमा क्लिक गरिसकेपछि करेन्ट इस्यु, अप्लाई फर इस्यु, एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड एप्लिकेशन रिपोर्ट लेखिएको हुन्छ।
‘अप्लाइ फर इस्यु’मा क्लिक गरेपछि कुन कम्पनीको आईपीओ खुलेको छ, त्यहाँ देख्न सकिन्छ। यसपछि त्यहाँ भएको कम्पनीमा बैंक छानेपछि बैंक शाखा र खाता नम्बर आफैं आउँछ। अब तपाईंको इच्छाअनुसार ‘अप्लाई कित्ता’मा गएर कति कित्ता भर्ने हो, त्यहाँ नम्बर राख्नुपर्छ। भर्न चाहेको कित्ता राखेपछि आफैं रकम देखाउँछ। रकमभन्दा तल बैंकबाट लिएको सीआरएन नम्बर राख्नुपर्छ।
त्यहाँ शर्त राखिएको हुन्छ। टिक लगाएर प्रोसेसिङ गरेपछि चार अंकको पिन नम्बर माग्छ। त्यो पिन नम्बर हालेर ‘ओके’ गरेपछि तपाईंको आईपीओ स्वीकृत भएको संकेत त्यहीँ आउँछ। तपाईंले आवेदन दिएकोबारे ‘एप्लिकेसन रिपोर्ट’ भन्ने अप्सनमा गएर हेर्न सकिन्छ। नेपाल लाइभ